WARBIXIN XASAASI AH: Yaa ka dambeeyey qaraxii magaalada Muqdisho? Maxaase looga baahan yahay DF Somalia? – RadioQandala.com
WARBIXIN XASAASI AH: Yaa ka dambeeyey qaraxii magaalada Muqdisho? Maxaase looga baahan yahay DF Somalia?
Natiijada baaritaankaba ka hor dowladda federaalka waxa ay markiiba farta ku fiiqday Ururka Alshabaab ee dowladda la dagaallama, horeyna looga bartay in ay sheegtaan mas’uuliyadda qaraxyo dad badan ay ku dhinteen oo qaarkood shacab ahaayeen.A
lshabaab ma aysan iska fogeynin eedeynta dowladda, mana aysan sheeganin mas’uuliyadda weerarka.
Cabdiraxmaan Sahal waa cilmi baare arrimaha xagjirnimada, BBC-da ayuu u sheegay sababta uu ugu malaynayo in Alshabaab ay u sheegan waysay qaraxa. “Waxay u aamuuseen waxaa weeyaan qaraxan waxa lagu gumaaday shacab, carruur iyo dumar. Qasaaraha aad buu u badan yahay, taas marka waa dhagar in qofka wixii uu sameeyay uu ka aamuso, waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin haddii aad sheegataan khilaaf dhexdiina ah armuu yimaadaa” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray “Haddii ay sheegtaan waxaa ka imanaysa labo arrin; midda koobaad waa kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay u naceen Alshabaab oo sii korodhay, kadibna ay ku dhiiradaan in ay iska dhiciyaan, midda labaadna waa, in dhexdooda ay ku kala jabaan, oo ay iska hor yimaadaan, maxaa yeelay Alshabaab iyaga oo nooc kasta ah, haddana lagama weynayo shaqsi shaqsi ay qaaddo qabyaalad ama wax uun, waxaa kale oo suurtagal ah in rag iyaga ka tirsan ay ka soo goostaan”. Dadka Alshabaab kasoo goostay waxaa ka mid ah hoggaamiye ku xigeenkii ururka Sheekh Muqtaar Rooboow (Abuu Mansuur), wuxuuna shir jaraa’id ku qabtay xarunta gurmadka loogu sameynayo dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay qarixii Soobe ee Hargaha iyo Saamaha.
« Dhegayso: Madaxweyne Gaas oo ku dhowaaqay in diyaarad daawo ah iyo dhaqaatiir u dirayaan Muqdisho
XOG: Arrimaha la qariyey ee Qaraxa Zoobe, Jahawareerka Carbeed iyo Fudeydka dawladda F Somalia? »